Iindaba - Abenzi beMold bagxila ekufumaneni isizukulwana esilandelayo
Abenzi bomngundo bagxila ekufumaneni isizukulwana esilandelayo
Njengoninzi ngakumbi nangakumbi kweminye imibutho yorhwebo, iChina China Manufacturers Association ikwasungule iiprojekthi ezijolise ekutsaleni isizukulwana esitsha.
Namhlanje, ukugaya isizukulwana esilandelayo sabasebenzi kuyeyona nto iphambili kubenzi baseTshayina. Ndiyazi ukuba oku kuvakala ngathi yinto nje. (Kwiminyaka yam, ndiyazi kakuhle ukuba zeziphi izinto eziyimichiza. Oku kukwangqina ukuba ndimdala kwaye andisekho "kwisizukulwana esilandelayo". Kwifektri yase China, kunzima ukubona abafana abancinci bezalwa emva kweminyaka engama-95, kwaye nayo imbi. Yiya kwiqela labafundi abafundayo kwaye ulandele inkosi yokufunda indibano yokubumba kunye nokwenza umngundo. Le ndawo intle iya kuhlala ikhumbula abo bazalwa ngeminyaka yoo-1980.
Njengesizukulwana esinamava omsebenzi omsebenzi othatha umhlala-phantsi ngokuthe chu, ishishini leplastikhi sele liqalisile ukuba "lidala" Lo mkhwa ungxamiseke kakhulu kwicandelo lokuvelisa ukungunda. Abavelisi bomngundo kufuneka bafune abasebenzi abancinci kwaye babagcine kolu shishino. Kuyabonakala kule nto ukuba kweli xesha lethu lokunqongophala kwabasebenzi abanezakhono, baya kuthi bathathwe njengabantu abatsha beneminyaka engama-40! Ewe, iminyaka engama-40 ngoku ilingana neminyaka engama-20 ubudala…
Ukongeza, eminye imibutho yeshishini lokungunda nayo isebenza nzima ukukhuthaza isizukulwana esilandelayo semidlalo.
Ukongeza, isebe le-thermoforming loMbutho wamaTshayina weeNjineli zePlastikhi useke izifundiswa kwaye usebenza nzima ekufumaneni abantu abatsha abaninzi ukuba bajoyine ibhodi yabalawuli. Kukhuphiswano lwezinto ezintsha kwiNkomfa yeThermoforming e2018, imoto elawulwa ngonomathotholo eyilwe ngabathathi-nxaxheba babafundi basebenzise umzimba onemibala ye-thermoformed-ebhetele kakhulu kunokhuphiswano lwe "static auto parts design design" ngaphambili.
Kwintlanganiso yonyaka ophelileyo, isebe le-thermoforming likwaququzelele ingxoxo yeqela malunga nokugaya abasebenzi abancinci "abakhangela ii-unicorn" -Ndiyathemba ukuba abasebenzi abancinci ababalaseleyo bazakufumaneka lula kunee-unicorn kwiintsomi.
Ukuqesha isizukulwana esilandelayo sabasebenzi yingxaki yexesha elide, kwaye inqanaba lokungabikho kwemisebenzi elisezantsi kakhulu e-China lithe kratya. Ukusombulula le ngxaki kuya kufuna amanyathelo aqhubekekayo kunye nokuyila.